Lahatsoratra nataon'i Bryan ao amin'ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Bryan
WP Reset dia plugin iray ahafahanao mamerina amin'ny laoniny ny tranokalanao amin'ny ampahany manontolo sy amin'ny ampahany izay faritra manokana ao amin'ny bilaoginao ihany no tafiditra ao anatin'ireo fanovana. Ny famerenana feno dia mazava tsara, manaisotra ny lahatsoratra rehetra, pejy, karazan-doka manokana, tsikera, fampitam-baovao ary mpampiasa. Ny hetsika dia mamela rakitra haino aman-jery (fa tsy manisy lisitra azy ireo eo ambanin'ny haino aman-jery), ary koa ny fampidirana toa ny plugins sy ny fampidinana lohahevitra, miaraka amin'ireo toetra mampiavaka ny
Miha-mifaninana hatrany ny tsena ara-dalàna ankehitriny. Vokatr'izany dia mitazona tsindry be dia be amin'ireo mpisolovava sy orinasam-pitsarana maro mba hiavaka amin'ny sisa amin'ny fifaninanana. Sarotra dia sarotra ny mitady fisiana matihanina amin'ny Internet. Raha tsy manery ny tranokalanao dia miroso amin'ireo mpifaninana aminao ny mpanjifa. Izany no antony, ny marika (ary ao anatin'izany ny tranokalanao) dia tokony hisy fiatraikany lehibe amin'ny orinasanao, manampy anao hahita mpanjifa vaovao, ary hampitombo